China chakagadzirwa FRP Protruded Washington City Offices I-Beam Profile fekitari uye vagadziri | Bonai
Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvese zvinoenderana nemuedzo wakawandisa kusangana nezvinodiwa nevatengi zvisati zvaendeswa.
2. Kukwikwidzana Mutengo
Mutengo unosiyana zvichienderana nechigadzirwa performace uye huwandu hwezvinodiwa.
Yedu inonyanya kuzivikanwa kambani yedu sainzi uye tekinoroji timu.
Kune zvese zvaunobvunza nezve isu kana zvigadzirwa zvedu, tinokupindura zvakadzama mukati memaawa gumi nemaviri.
5.Kupaka & Kuendesa
Zvigadzirwa zvinogona kurongedzwa uye kutumirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
MIBVUNZO nezve FRP
Mubvunzo: Panhare Dzakasimbiswa Dzinogona kuiswa pamusoro pezvikamu zvakawanda?
A: Fibre yakasimbiswa mapaneru aigona kuiswa kanenge pane ese substrates. Nekudaro, iyo yekumisikidza nzira inoshandiswa ichasiyana kubva kune imwe substrate kuenda kune imwe.
Mubvunzo: Ungaisa sei fiberglass yakasimbiswa mapaneru pamusoro peDrywall?
A: Ehe, FRP inogona kuiswa kanenge pane ese substrates nema mechanical gadziriro nzira. Nekudaro kana iye kontrakta achida kuisa Fiberglass yakasimbiswa mapaneru achishandisa zvinonamatira, zvinogona kuitwa, ingoda kushandisa solvent yemahara inonamira chete pamusoro penzvimbo dzinopinza senge kongiri block, yakaomawall, plywood kana mapurasita madziro. Paunenge uchiisa FRP pamusoro penzvimbo dzisingaite porous, senge mataira emadziro, uchishandisa inoteedzera base adhesive ine rivets inokurudzirwa, Kuti upedze kumisikidza zvirinani, yeuka kujecha mataira kuitira kuti FRP ikwanise kutevedzera zvirinani.
Mubvunzo: Inogadziriswa fiberglass yakasimbiswa mapaneru inogona kuiswa yakaenzana pamadziro?
A: FRP mapaneru anoshanduka-shanduka saka inogona kuiswa yakatarisana nemadziro. Asi rangarira sechero chinhu chekuvaka, icho chichawedzera uye kubvumirana zvinoenderana nemamiriro ekunze kwayakaiswamo.
Mubvunzo: Ndeapi maturusi anodiwa kuisa FRP?
A: Kuiswa kweFRP kunogona kuitwa nekushandisa: yakanaka zino saha reza, carbide chibooreso zvishoma, inokurudzirwa nemugadziri trowel, uye laminate chinotenderera iyo ichashandiswa kuverengera kwakanyanya kunamatira pakati pePRP nepamusoro payo pairi kuiswa.
Mubvunzo: FRP inogadzirwa nehukuru hupi?
A: Fiberglass yakasimbiswa mapaneru kazhinji inogadzirwa mu4 tsoka nezvisere tsoka zvikamu uye nezvimwe zvekuvaka zvidimbu uye / kana kuumbwa. Kune madiki maficha uye huso huso FRP inogona kutemerwa kune zviyero chaizvo nekushandisa saga rine simba nezino rakanaka, macarbide matipi mashizha kana mashizha emasaoni. FRP Paneli mune 1mm ukobvu inorema ingangoita 1.5kg pamamita mita.
Mubvunzo: Chii chingave mhinduro inogoneka uye nekukurumidza kumisikidza maitiro?
A: Fiberglass yakasimbiswa mapaneru aigona kupihwa neakagara akavezwa-mahwendefa eplywood, EPS kuputira kana yakaomeswa. Nekushandisa iyi mhando yeFRP, inobvumidza kumisikidzwa nekukasira uye ichaburitsa yakatsetseka nzvimbo, nekuti inobvisa kudiwa kwemariveti. Izvo zvakare zvinokurudzirwa usati waisa FRP kubvisa kurongedza kwemapaneli, munzvimbo iyo ichaiswa. FRP zvine hungwaru inozotora iwo mamiriro ezvakatipoteredza enzvimbo ichaunganidzwa mapaneru.
Pashure: China Fekitori Yakagadziriswa FRP Fiberglass Grating yeKuvaka
Zvadaro: FRP Purlin Kuvaka Chinangwa Purlin Mutengo
GRP Pultruded Washington City Offices Forms Washington City Offices Tube ...
FRP Purlin Kuvaka Chinangwa Purlin Mutengo
China Factory Customized FRP Washington City Offices Grating ...